“Symposium international sur la biodiversité et la (...)
“Symposium international sur la biodiversité et la santé”.
Tanterahana any Mahajanga ny zoma 19 sy sabotsy 20 novambra ny Symposium international sur la biodiversité et la santé (Fikaonan-doha iraisiam-pirenena momba ny rohivoahary sy ny fahasalamana ).
Izy ity dia fihaonambe siantifika andraisan’ireo mpikaroka sy mpisehatra maro eo amin’ny tontolon’ny rohivoahary avy eto Madagasikara sy ireo firenena mpiara-miombon’antoka aminy.
Ny tanjona amin’izany dia ny mba hanangonana ny hevitra rehetra ahafahana manabe voho sy manatsara ny fikirakirana, ny fitahirizana ary ny fitrandrahana ireo zavamananaina hita ao anatin‘ny rohivoahary izay ananan’i Madagasikara be dia be tokoa, ka mba hahalasa izany ho fanoitra eo amin’ny fampandrosoana. « Mifampiankina be dia be ny fiainan’ny olombelona sy ny rohivoahary.
Ny rohivoahary no miantoka ny fahaveloman’ny olombelona ary etsy ankilan’izay, ny olombelona dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra mba hitandrovana ny rohivoahary mba tsy hanimba azy », hoy Profesora Assoumacou Elia Béatrice, minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ity Fihaonambe andraisan’ny firenena maromaro anjara ity. Anisan’izany i Alemaina izay mpiara-miombon’antoka nanampy be dia be teo amin’ny fikarakarana sy fanomanana azy ity, Frantsa ary Costarica.
Ankoatra ny fihaonana ara-tsiantifika dia nisy ihany koa ny fidinana ifotony tany amin’ny valan-javaboaharin’Ankarafantsika. Toerana voaaro izay manan-danja tokoa eo amin’ny resaka rohivoahary anefa anisan’ireo tandindomin-doza noho ny fanimbana ataon’ny olombelona, raha tsy hilaza afa-tsy ny firehetana in-droa miantoana nihatra taminy.
Marihina fa ankoatra ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa dia miara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana ity Fihaonambe ity ihany koa ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy sy ny ministeran’ny Fahasalamana.